अध्याराे केठाभित्र गरीएकाे पार्टी एकताकाे निर्णय सम्झाैता मात्रै हाे: मणि थापा - Nepali Online News Media-shikharnews.com
अध्याराे केठाभित्र गरीएकाे पार्टी एकताकाे निर्णय सम्झाैता मात्रै हाे: मणि थापा
(मणि थापा) नेपालको माओवादी आन्दोलनमा बेग्लै पहिचान बोकेका नेता । माओवादी परित्याग गरेर आफ्नो छुट्टै वैचारिक धारको नेतृत्व गरेका नेता थापा एकता प्रक्रियाअन्तर्गत फेरि माओवादी केन्द्रसँग जोडिए । यो सँगै उनले माओवादी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका बोकेको वाइसिएल नेपालको फ्रयाक्सन इन्चार्जको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका छन् । माओवादी भित्र प्रखर वक्ताको रुपमा चिनिने मणि थापासँग कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी एकताका विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताः
अहिले त वर्ग, विचार भन्दा पनि कसरी सकिन्छ शक्ति ९पावर० हत्याउने भन्ने देखियो । कसरी हुन्छ पावर हत्याउने र पावर भएपछि विचार हुन्छ ९विचारले पावर हैन कि पावरले विचार० भन्ने पो देखियो । त्यसैले शक्ति केन्दिीत अवस्थाले विचारलाई नजरअन्दाज गर्ने परिस्थिति बनेको छ । तर विचार बिना पार्टी र समाज चल्दैन ।
तर एमालेभित्र बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको कार्यदिशा हुनैपर्ने मत बलियो रहेको छ । तपाईहरुको धारणा के छ यो राजनीतिक कार्यदिशाको बारेमा?
विगत फर्केर हेर्दा अब सर्वाहाराकरण, या सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व जस्ता कुराहरु असान्दर्भिक या अप्रसांगिक नै भएका हुन त?
अप्रसांगिक नै त भएका होइनन् । तर विश्व पूँजिवादमा पछिल्लो समयमा देखिएको परिवर्तनका आधारमा हामीले नयाँ ढंगले यी विषयमा परिमार्जन भने गर्नुपर्छ । किनभने कुन वर्गको पार्टी हो र शासनसत्ता हो भन्ने कुरा त ख्याल गनुपर्छ । अहिले पनि बुझ्नैपर्ने के हो भने कम्युनिष्ट पार्टी श्रमिक वर्गको पार्टी हो । यसको एउटा हिस्सामा सर्वहारा, किसान निम्न मध्यम वर्ग पनि हुन्छन् । मूलरुपमा श्रमिकको पार्टी भएका हुनाले श्रमिक वर्गले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा नयाँ ढंगले सोच्न सकिन्छ । तर यसले मूलतः श्रमिक वर्गको हितमा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर नयाँ आयामले पनि सोच्नुपर्छ।
(साभार : गोकर्ण भट्टले एभरेष्ट दैनिकका लागि लिएकाे अन्तर्वाता )